အချစ်၏ ကိန်းသေကို ရှာဖွေကြည့်ခြင်း… | PoemsCorner
အချစ်၏ ကိန်းသေကို ရှာဖွေကြည့်ခြင်း…
အချိန် နဲ့ သိက္ခာကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချေလိုက်..
ခင်ဗျားတို့မှာ ငွေရယ် ဂုဏ်ရယ်သာမရှိရင်….
အချစ်စစ်ဆိုတာကို လိုက်မရှာချင်ကြနဲ့…….။ ။
In: ကဗျာ Posted By: naungye Date: Sep 5, 2011
Leave comment 12 Comments & 491 views
ဟုတ်ကဲ့ပါ တစ်ခုတော့ပြောချင်တယ် အချစ်စစ်ဆိုတာ စစ်တယ်ထင်ရင် စစ်တာဘဲ မစစ်ဘူးထင်ရင်တော့ မစစ်ဘူးပေါ့ ဂုဏ် နဲ့ ငွေ ရှိမှအချစ်တစ်ခုမွေးဖွားလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး အချစ်ကို သည်းခံခြင်း အနစ်နာခံခြင်း နားလည်နိုင်ခြင်း သစ္စာမြဲခြင်း တို့နဲ့ဘဲတိုင်းတာလို့ရတာပါ ကျန်တာဘာနဲ့မှတိုင်းတာလို့မရဘူး ကျွန်တော့အမြင်ပြောတာပါ မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ် ။ တကယ်ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဘဲ ဒီကဗျာလေးဖတ်ရတာ maths ပုဒ်စာတစ်ပုဒ်တွက်နေရသလို စိတ်ကိုတက်ကြွစေတယ်ဗျာ အားပေးသွားတယ် ။
By: X - ray at Sep 6, 2011
စကာလုံးလေး တွေ ကောင်းတယ် ဗျာ
By: လုလင်ငယ်သွေး at Sep 6, 2011
By: အသဲကွဲမိုး at Sep 6, 2011
အားပေးသွားတယ်နော်…………အချစ်ကိုစောစောက poem poem မှာရေးသလိုပြောရရင်တော့
By: May Kha at Sep 6, 2011
By: poem.poem28 at Sep 6, 2011
ဂုဏ်တွေ ငွေတွေဆိုတာ လိုလာတယ်ထင်တယ်ဗျ
By: လွမ်းနောင် at Sep 6, 2011
လူဆိုးကတော့မဝေဖန်တော့ပါဘူးအကို … ငွေတွေဂုဏ်တွေမပါပဲနဲ့လဲ
အချစ်စစ်ကိုတွေ့နှိုင်တယ်လို့တော့ထင်တယ် … 😛
By: chityellusoelay at Sep 6, 2011
တနေ့နေ့တော့ တွေ့မှာပါ…. 😀
By: လွမ်းနောင် at Sep 7, 2011
ကိုလွမ်းနောင်ပြောတဲ့ အချစ်မျိုးလည်းဒီကမ္ဘာမှာရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် အချစ်စစ်ဆိုရင်တော့ အချစ်ချည်းဘဲရှိမှာဘဲ ဂုဏ်တွေ ငွေတွေပါမှအချစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒါအချစ်စစ်မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ် ကျွန်တော့အမြင်ပြောတာပါ လျှာရှည်သလိုဖြစ်သွားရင်တော့ တောင်းပန်တယ်ဗျာ ။
By: X - ray at Sep 7, 2011
တခါတလေ ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ ရှိတယ်……အရေးအသားမှန်တယ်ဗျာ
တချို့တွေအတွက်ဆိုရင် money made everything ပဲ
ကေ အားပေးသွားပါတယ်…..ခံစားချက်နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်တယ်….။
By: ကေသရီ at Sep 8, 2011
i agree with x ray.
By: ei lay at Sep 10, 2011
By: 13th at Dec 27, 2012